Kulankii Madaxweynaha iyo Aqoonyahanada Northland Sate of Soomaaliya
Madaxweynaha Soomaaliya mudane Abdullahi Yusuf Axmed oo la kulmay aqoon yahano dhalin yara ah oo ka yimid gobalka Minnesota una waday madaxweynaha fikir cusub oo lagu doonayey in lagu dhiso maamul goboleed cusub.
Madaxweynha oo isagu u yimid arimo la xiriira dhinaca United Nation-ka ayaa hadana waxa uu la shirayey jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan wadanka dibadiisa. Shirarkaas oo u dhacayey kuwa gaargaar ah iyo kuwo guud: kuwa guud ayaa waxa ka mid ahaa shirkii ka dhacay Washington DC oo ay isugu yimaadeen in ka badan boqolaal Soomaali ah, halkaas oo uu madaxweynuhu ka jeediyey qudbad qiimo leh.
Shirarka gaarka ah ayaa Madaweynuhu kula kulmayey jaaliyada qolkiisa hotelka, halkaas oo ay isku weydaarsanayeen aragtidooda. Aqoon yahanada dhalinyarada ah ayaa iyagoo raadinayey in dhawayd fikir cusub oo lagu soo dabaalo siyaasada Soomaaliya. Aqoon yahanadan ayaa waxa ay soo bandhigeen arin xal ah oo lagu xalin karo qilaafka ka taagan gobolada Sool, Sanaag, iyo Cayn oo in dhawayd ka jirtey colaad iyo sheegasho marba qolada kale ay sheeganayeen.
Aqoon yahanada ayaa waxa ay fikirkoodii u soo bandhigeen Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Abdullahi Yusuf Axmed ,fikirkaas oo xambaarsanaa sidii loogu sameyn lahaa maamul cusub gobolad Sool, Sanaag, iyo Cayn, Madaxweynahuna waa soo dhaweeye arinkaas, waxana uu yiri wax kasta oo lagu badnbaadinayo shacabka Soomaaliya waan taageerayaa. Ugudambeyntii, ayaa waxa ay aqoon yahanadu yiraahdeen waxa aanu kula noqoneynaa fikarkayagii aqoon yahanada degan gobalka Minnesota sidii loo soo saari lahaa baaq muhiim ah oo waxtar u leh umada degan gobolada Sool, Sanaag, iyo Ceyn.
Fadlan Halkan ka daawo xafladii Soo Dhaweynta Madaxweynaha: http://www.insideminnesota.org/sports.html
Haweenka Minnesota oo La Kulmay Madaxweynaha Soomaaliya
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu casuumad ka helay United Nation-ka si uu qubdab uga jeediyo halkaas, hadaba intii uu ku sugnaa New York iyo Washinton DC ayaa waxa halkaas ku soo dhaweeyey haweenka reer Minnesota (Somali Women Civil War Survivors).
Kulnakaas oo ay haweenka reer Minnesota ku muujinayeen Banaanabax weyn oo ay ka dhigeen xarunta United nation-ka horteeda iyagoo watay boodhadh waaweyn oo ay ku qornaayeen noolow Abdulahi Yusuf iyo Cadawgaa ha dhaco. Saxaafada Maraykanka iyo kuwa caalamka yaa halkaas ku wareystey hooyooyinkaas. Mas�uuliyiintii United Nation-k markii ay arkeen shucuurta ka muuqda hooyooyinka iyo sida ay u jecel yihiin in ay helaan dowlad dhab ah ayey waxa ka duubeen cajalad oo ay ka dhex shideen United Nation-ka markii uu qudbada akhrinayey Madaxweynaha. Madaxweynaha ayaa sidoo kale gacmo furan ku soo dhaweeyey hooyooyinka una mahad celiyey sida ay ugu dadaalayaan in ay dowlad helaan oo ay dalkoodii ku soo noqdaan iyagoo nabad ah. Waxa sidoo kale casho sharaf u sameysey marwada Madaxweynaha Xaawo oo runtii ku tilmaantey haweenka Minnesota haween marwalba jecel dowladnimo, nabad, iyo in ay ku noqdaan wadankoodii hooyo.
Ugu dambeyntii ayaa haweenka Minnesota waxa ay ka qayb galeen xafladii wayneed ee lagu soo dhaweynayey madaxweynaha iyo waftigii la socday oo uu ka mid aha Wasiirka Arimaha dibada ee Soomaaliya Aqoon-yahan Cali Axmed Jaamac (Jangeli). Xafladaas oo ay ka muujiyeen wacdaro: iyagoo ku muujinayey buraanbur, heeso iyo ruxutiaan ay luxayeen calanka Soomaaliya.
Xafladii Washintn DC...
Xaflad si qurux badan loo soo agaasimey ayaa waxa ay ka dhacdey caasimada wadanka Mareykanka (Washington DC). Xafladaas oo lagu soo dhaweynayey Madaxweynaha wadanka Soomaaliya Mudane Abdullahi Yusuf Axmed.
Xafladaas oo ay isugu yimaadeen marti sharaf ka kala timid gobolada Mareykanka, wadanka Kanada, iyo dad aan badneyn oo ka yimid yurub. Marti sharftaas ayaa waxa ay isugu jireen Siyaasiyiin, Aqoon-yahano, Ardey, Hooyooyin, Macalimiin, Fanaaniin, Suxufiyiin, iyo Ajnabi badan oo ka kala yimid xafiis yada wadanaka Maraykanka.
Madaxweynaha ayaa waxa la socday wafti heer sare ah oo uu ku jirey wasiirka arimaha dibada ee Soomaaliya Aqoonayhan Cali Axmed Jaamac (jangali). Wasiirka oo isagu ku soo dhaweeeyey madaxweynaha shirka ayaa waxa uu hordhac sii yey marti sharaftii halkaas isugu timid una sheegey in ay caawa ka dhargi doonaan qudbada madaxweynaha.
Sidoo kale waxa halkaas warbixin qiime leh ka soo jeediyey marti sharaftii ka kala timid qaaradaha aduunka iyo gobolada Mareykanka iyagoo iska soo xulay qolo walba qof u warbixiya. Waxa iyagu hadalka qaybinayey gobalkii martida loo ahaa Soomaalida degan (Washington DC). Warbixinadaas oo runtii qolo walba kaga warbixineysey sida Soomaalidu u degan tahay, iskuna kaashadaan, iyo sida ay ugu baahan yihiin in la helo dowlad Soomaaliyeed.
Ugu dambeyntii ayaa madaxweynaha Soomaaliya Mudane Abdullahi Yusuf Axmed u istaagey qudbad qiimo leh kagana hadlay marxalado dhowr ah oo ay dowladu soo martey iyo hada marxalada ay ku jiraan, iyo waxa ay doonayaan in ay qabtaan inta u dhiman xilkooda. Waxana uu ku soo gabogabeeyey in Soomaalidu gacmaha is qabsato kuna dadaalaan nabad sidii looga shaqeyn lahaa.
Fadlan Halkan ka daawo xafladii Soo Dhaweynta Madaxweynaha:
Fadlan Halkan ka daawo xafladii Soo Dhaweynta Madaxweynaha: http://www.insideminnesota.org/images.html
Somali Media Abdimalik Askar aabdimalik@hotmail.com